Ọdịnihu nke Utopian nke Na-ere Ọwa | Martech Zone
Ndị mmekọ Channel na Value-Added Resellers (VARs) bụ nwa nkuchi na-acha uhie uhie (a na-emeso na-enweghị ihu ọma nke ọmụmụ) mgbe a bịara n'ị nweta nlebara anya na akụrụngwa sitere n'aka ndị nrụpụta nke ọtụtụ ngwaahịa ha na-ere. Ha bụ ndị ikpeazụ inweta ọzụzụ na nke izizi ịza ajụjụ maka ị nweta ego ha. Na mmachi ahịa Amawaputala, na ihe mgbe ochie ahịa ngwá ọrụ, ha na-adọga n'ụzọ dị irè-ekwurịta okwu mere na ngwaahịa ndị pụrụ iche na dị iche iche.
Gịnị bụ ọwa ahịa? Usoro nke nkesa nke azụmahịa jiri na-ere ngwaahịa ya, ọ na-abụkarị site na ịkekọrịta ike ahịa ya n'òtù ndị na-elekwasị anya na ntanetị dị iche iche. Iji maa atụ, ụlọ ọrụ nwere ike mejuputa atụmatụ ahịa ọwa iji ree ngwaahịa ya site na ndị na-ere ụlọ, ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ site na ire ahịa. Business Akwụkwọ ọkọwa okwu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla ihe mgbawa na ngalaba teknụzụ azụmaahịa, na-akpata ụlọ ọrụ nyocha Gartner iji ma ama buru amụma na CMOs ga-eme karịa CIOs na IT site na afọ 2017. Nke a na - eduga m ịjụ etu esi, ma ọ bụ ọ bụrụ na, OEM ga - emezi usoro ahịa ha, yana nke ka mkpa, a ga - enwe isi ọhụụ banyere ngwa ahịa enyere aka nke nwere ike ịmetụta uto na ọganiihu nke ahịa ahịa ahụ?
Site na teknụzụ ọhụụ na-agbanwe ngwa ngwa nke ahịa na ire ahịa echere m na ọdịnihu nke ire ọwa ga-ebelata ụfọdụ nsogbu ịma aka ndị mmekọ na VAR ugbu a:
ọzụzụ - A-adịbeghị anya ọmụmụ mere Qvidian na-egosi na ọ na-ewe nkezi nke ọnwa 9 iji zụọ onye nnọchi anya ahịa, ma ọ nwere ike were oge ụfọdụ ihe ruru otu afọ ka ha rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na onye nnọchi anya nwere ike ibu ọrụ maka ire otu ngwaahịa, ma ọ bụ akara ngwaahịa, a na-ekenye VAR ire ọtụtụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ a bụ eziokwu maka ndị nnọchi anya azụmaahịa, naanị mmadụ nwere ike iche na onye ọwa na-ahụ maka ịmụrụ ụdọ maka ngwa ahịa sara mbara karịa nke otu onye nrụpụta nwere ike iwe ogologo oge.
Enweghi itinye aka na Ngwa ahia - Ndị otu ahịa anaghị eji 40% nke ihe niile erere ahịa, nke nwere ezi uche mgbe ị tụlere na mgbe mgbe ihe ndị a bụ broshuọ dị na ntinye akwụkwọ, vidio vidio, ma ọ bụ ngosipụta PowerPoint tozuru etozu nke na-anaghị enyere aka ịmepụta usoro ahịa ahịa. Dị ka ndị na-azụ ihe ugbu a na-achọwanye njikwa, ndị mmekọ ọwa ga-enwerịrị ike ịnye mmekọrịta na mmekọrịta ahịa ahịa, maka ngwaahịa na azịza ha niile ha na-ere. Mgbe na-ere ngwaahịa si a dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ ndị na mpi ọ bụla ọzọ, ọ ga-abụ na ọwa mmekọ ga-eji oge ha na-agbalị na-ere ngwaahịa ha kacha mfe ka iche na ya mere nso amụọ na. Ndị na-emepụta ngwaahịa achọpụtala nke a, ma na-atụgharịrịrị na ụdị ụdị ngwaahịa 3D, nke na-ele anya ma na-akpa agwa dịka ngwaahịa ahụ, iji nweta onyinye ha n'aka ndị ahịa ahịa na ndị mmekọ ọwa. Agbanyeghị, ndị mmekọ ọwa na - abụkarị ndị ikpeazụ ịnata ngwa ọrụ mmekọrịta ndị a na - arụ ọrụ n'ihi ụgwọ ikike ikike ngwanrọ dị elu, ma ọ bụrụ na ha anata ngwaọrụ mmekọrịta, ma hapụ ha nnukwu nsogbu.
Ijikọ ụwa ọnụ - VAR na ndị mmekọ ọwa na - adịkarị n'akụkụ ụwa niile, nke nwere ike ịdị anya site na ebe nrụpụta kacha nso ma ọ bụ ebe ngosipụta ngwaahịa. Ya mere, ha choro ngwa oru ga enyere ha aka ire nke oma n’ebe obula, n’oge obula. Ọ bụ ezie na ngwa mkpanaka na-amalite ibelata nsogbu a, ọtụtụ mbadamba / smartphones na-ebu nnukwu ibu nke ewu ewu na mba dị iche iche, na-eme ka itinye ọdịnaya ka njọ karịa, dị ka ngwa ahịa na-ere ahịa ga-enwe ike ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla nke onye ọwa nwere. Ihe mgbochi asụsụ na-emekwa ka ọtụtụ ngwa ahịa ghara ịba uru, belụsọ ma enwere ike ịtụgharị ya n'asụsụ obodo maka iji mba ndị ọzọ.
Nweta Universal - Dịka e kwuru na mbụ, ndị nnọchi anya mba ụwa dum na-eji ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche, site na laptọọpụ na ekwentị mkpanaaka, ma chọọ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ-na-enye ahụmịhe zuru ụwa ọnụ n'agbanyeghị ọnọdụ. Dabere na Qvidian, otu ihe kpatara na Ahịa anaghị eleghara ngwa ahịa bụ n'ihi na ha enweghị ike ịchọta ma ọ bụ nweta ha. Nke a pụtara ịnweta ozi ziri ezi nke etinyebere n'aka ndị mmekọ ọwa na VAR na ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị dị oke mkpa iji kwusaa ozi gị n'enweghị nsogbu. Iji mee ihe na mpaghara ebe enwere ike ịnweta Internetntanetị, ma ọ bụ iji ya rụọ ọrụ dị ka isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ ebe a na-egbochikarị ịntanetị, ndị mmekọ ọwa chọrọ ngwa nke na-arụ ọrụ na ONLINE na offline, na laptọọpụ, smartphones, na mbadamba. Ọtụtụ mgbe, ụdị ngwa ndị a chọrọ ikikere (dabere na ọnụọgụ ndị ọrụ), nke na-ahapụ ndị mmekọ ọwa na VAR nnukwu ọghọm, ebe ọtụtụ OEM na-ala azụ ịwelite taabụ maka ndị mmekọ na-enyere ndị ọrụ aka nwere ike ma ọ bụ ghara n'ezie iji ya. .
Cheedị echiche Ọdịnihu nke Utopian maka ire ọwa
Ngwá ọrụ ahịa ahịa emepụtara karịsịa maka ọwa agaghị enye naanị 100% nnweta maka ngwaahịa mmekọrịta, (site na igosi ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) mana ọ ga-egosipụtakwa otu ngwaahịa dị iche iche nwere ike isi rụkọta ọrụ ọnụ iji dozie nsogbu azụmaahịa ndị ahịa, n'agbanyeghị ụlọ ọrụ na-arụpụta ha. Nke a ga - eme ka onye ọ bụla sonye na ya bụrụ ọkachamara n’ahịa, ebe ha nwere ngosipụta ngwaahịa dị mkpa, ihe nkwado, yana ozi ahịa dịịrị ha ozugbo. Ka oge na-aga, ndị mmekọ ọwa ga-enwe ike iwekọta ngosipụta ngwaahịa 3D a niile, agbanyeghị OEM, n'ime otu ngwa ahịa na-emekọrịta mmekọrịta yana akara nke aka ha, na-enye ha ohere igosipụta ihe kacha mma. ngwọta maka ndị na-azụ ahịa site na ime ka onyinye dị iche iche dịrị na ndị mmekọ ha.
Ọ bụghị naanị na ezigbo ngwaọrụ ga-enwe ike ịnweta ahịrị ngwaahịa niile, mana ndị ọrụ na-akparaghị ókè ga-enwe ohere 24/7, n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị, ebe ọ bụla n'ụwa - na-enye ahụmịhe zuru ụwa ọnụ n'agbanyeghị ọnọdụ ma ọ bụ ikpo okwu. Ederede a na-atụgharị na ngwa ngwa ga-eme nsụgharị nsụgharị nke mba dị iche iche ngwa ngwa, na ndakọrịta ngwaọrụ ga-atụgharị ndị mmekọ ngwaọrụ ọ bụla 'inweta ihe mmepe ahịa na-adọrọ adọrọ.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka ọ bụ nrọ, ekwenyere m na ọdịnihu nke mmekọrịta, ngwa ọrụ obe dị ka nke a maka ndị mmekọ ọwa na VAR nwere ike ọ gaghị anọ oke!
Tags: ndị ọrụ ọwaọwa ahịaọzụzụ ọwa ahịanjikọ akagartnernjikọ ụwa ọnụmmekọrịtaOEMUgwuekeresellersNkwado ire ahịaohere zuru ụwa ọnụuru ndị na-ere ahịa bara uruvarvas
4 Igodo ụzọ dị mkpa iji nweta Smart Mobile Strategy